Izimpawu nokudla okunempilo nge-arthrosis
Izifo ezivame kakhulu izifo ezihlangene. Konke, ekuhlaziyweni kokugcina, kuyimbangela yokwephulwa kwemisebenzi eyenziwa ngumbuthano, ngenxa yokubhujiswa okuphelele noma okuyingxenye yezincuba zokuqothulwa komzimba, kanye nangenxa yokwanda komthelela wezinambuzane ezixhunyiwe kanye namathambo. Ezimweni eziningi, lezi zinqubo zixhomeke ekutheni umzimba utholakale kanjani, okusho ukuthi kungenzeka ukuvimbela nokuphatha lolu hlobo lwesifo ngokudla okunempilo. Okudume kakhulu kwalolu hlobo lwesifo yi-arthrosis. Mayelana naye futhi kuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko esithi "Izimpawu nokudla okunempilo nge-arthrosis."
I-Arthrosis yisifo sezingxenyana zamathambo, imbangela yayo ukubhujiswa kwezingcuba zomzimba we-articular surfaces ngenxa yemetabolism yokunciphisa umzimba (okunomsoco). Kuyaziwa ukuthi konke okudingekayo ukuvuselelwa kwezicubu ezihlangene kanye nomsebenzi oqondile wamalungu (izakhi, oksijeni) kuhanjiswa ngegazi. Uma kunjalo, uma umuntu enenkinga yemithi noma kunezinkinga zemithambo yegazi, izakhi eziningi ezidingekayo ngeke zisebenze ngokwanele, okusebenzayo ekuhloliseni kokugcina, njengesizathu sokubhujiswa kwezicubu zomzimba emzimbeni womuntu.
Izizathu zalolu hlelo zihluke kakhulu. Lesi sifo singabonwa kubantu asebekhulile, nakubantu abaye balimala kanye nezifo ezihlanganyelwe, kubantu ababhekene nokucindezeleka ngenxa yemidlalo noma umsebenzi omningi wezandla, noma abantu abanomsebenzi ongasebenzi.
Eqinisweni, ukusebenzisa ukudla, ukwenza izinguquko ezinkambisweni zokuxilonga ngaphakathi kokubambisana kunzima kakhulu. Noma kunjalo, ukudla okunempilo okukhuthaza ukwanda kwesilinganiso semetabolism emzimbeni, uma nje ukudla kwakho kuhlanganisa zonke izakhi ezidingekayo (amavithamini namaminerali). Ngaphezu kwalokho, akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi ukudla kunomthelela ekulahlekeni kwesisindo, kodwa futhi nge-caveat: ukudla kwakho akufanele kuqukethe ama-carbohydrate anamathele kalula emzimbeni, namafutha aphikisayo. Ngesikhathi esifanayo, ithuthukiswe ikakhulukazi i-arthrosis, uhlelo lokudla alukho. Kodwa-ke, kunezeluleko eziningi zokudla okungcono kule sifo.
Okokuqala, ukudla kwakho kufanele kube nomsoco okwanele (amaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate, amaminerali, amavithamini). Kuyaziwa ukuthi amaprotheni akhiwa ukwakha izicubu ezintsha, kufaka phakathi izicubu ezihlangene. Ngemuva kwalokho, akumelwe sikhohlwe ukuthi emgodleni wayo, nge-arthrosis, isifo sezinyosi sibhujiswa, futhi izicubu zethambo ziyayithatha. Ngakho-ke, amaprotheni ayenesidingo sokudla i-cartilage, ikakhulukazi equkethwe ubisi kanye neziqhamo zayo, ngoba lolu hlobo lweprotheyini luyadla kalula, futhi i-calcium, equkethe ubisi, idinga izinqaba zamathambo. Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa ngamaprotheni wesimo semfuyo, esiqukethe inyama, kodwa hhayi amafutha, inhlanzi, ubhontshisi, i-porridge, njll. Futhi ukuze uthole ukunambitheka okungcono kwezakhi eziqukethwe kule mikhiqizo, izitsha ezivela kubo zingcono ukupheka umbhangqwana . Futhi, ngenxa yalolu hlobo lwesifo, umhluzi obandayo noma ojelly ovela emathanjeni onomkhiqizo okhuphukile wezincuba zomzimba (ingulube, imilenze yenkomo, njalonjalo) iyasiza. Izitsha zalolu hlobo zicebile nge-protein collagen, okwenza amathambo ne-cartilage ihlale ihlala isikhathi eside, futhi ikhona emigqeni nemisipha. Ngaphezu kwalokho, i-gelatin, equkethe izithako ezihlukahlukene zokudla, okusiza ukuvuselela amathambo, iyasiza.
Akubalulekile nakancane iziguli ezine-arthrosis nama-carbohydrate. Basebenzisa njengomthombo wamandla, ngakho-ke kudingeke ukuba kube nomzimba. Nokho, akuzona zonke izinto ezilula, ngoba emvelweni kunezinhlobo ezahlukene ze-carbohydrate. Ngakho-ke, ishukela elilula, kalula futhi ngokushesha unomzimba, ngokushesha nje uba amafutha angaphansi, ngemuva kokunikeza imali encane yamandla. Ama-carbohydrate anzima, ngokuphambene nalokho, awanamathele ngokushesha, futhi umzimba ungadonsa amandla kubo isikhathi eside, kuyilapho ungaguqulwa waba ngamafutha. Lokhu, futhi, kudlala indima enkulu ngokweqile ngokweqile, ngakho-ke, ukukhululeka ngokweqile okuhlangenwe nakho kwamalungu.
Ngesikhathi esifanayo, umuntu akufanele akhohlwe ngokubaluleka kwamafutha emzimbeni womuntu. Emva kwakho konke, ngaphandle kwabo, i-metabolism iyaqhubeka kancane kancane. Nokho, kufanele kuqashelwe ukuthi ngesifo esifana ne-arthrosis, umuntu udinga kuphela ibhotela nemifino yemifino. Ngokufanayo, amafutha, aphikisayo, aqukethe, isibonelo, enyameni enamafutha, iyimbangela yokwakheka kwe-cholesterol plaques ngaphakathi kwemithambo yegazi, ekugcineni ibe yisithiyo ekugezeni okujwayelekile kwegazi ngaphakathi.
Ngokuphathelene namavithamini namaminerali, ukubaluleka kwazo ezinkambisweni zomzimba zomzimba kunzima kakhulu ukuzithokozisa, ngenxa yokuthi zingenye yezinto ezibalulekile ze-hormone kanye ne-enzyme edlala indima ebalulekile ekusetshenzisweni kwemithi. Kulesi simo, kufanelekile ukugqamisa amavithamini:
I-B1 (evezwe kabanzi ngamagesi okolweni, amantongomane, i-porridge, inyama enomzimba);
I-В2 (imikhiqizo evela kufulawa wokugaya okugcwele, ubisi lwe-skim kanye neziqhamo zayo);
B6 (imikhiqizo ecebile isitashi); I-folic acid (isesibindi nemifino eluhlaza).
Kufanelekile ukugcizelela ukuthi lezi zeluleko ngokudla okunempilo akuzona ukuhlaselwa kwesifo esifana nesifo se-arthrosis. Kodwa-ke, ukulandela ngokuhambisana nokwelapha okufanelekile kuzokusiza ukuba unqobe lesi sifo bese uvele uthuthukise impilo yakho.
Ingabe kuyingozi ukufudumala ukudla kuhhavini ye-microwave?
Ama-macrobiotics: umsoco wokuvumelana nokuphila isikhathi eside
Ingabe umuntu uyadla?
Izinzuzo zekuseni kwasekuseni okunempilo nangempilo
Yikuphi ukudla okuqukethe amavithamini?
Yini ongayidla ngaphandle kokulimaza empilweni yakho?
Izitsha ezitholakala izithelo ezishisayo
Ososayensi bathola ukuthi yiziphi izinto zokwelapha zikagalikhi
Isaladi ngama-mushroom agwetshiwe kanye utamatisi we-cherry
Inqubo, izindlela, imiphumela ye-abdominoplasty kanye nokuvuselelwa isikhathi emva kokuhlinzwa
Isaladi "Ngaphansi kolwandle"
Ungavula kanjani isitolo bese uqala ibhizinisi lakho?
Indlela yokuphepha nokuhlanza kahle izipikili ezivela ku-varnish?
Lapho kugubha i-Hanukkah 2015: iholidi elikhulu lamaJuda
Indlela yokwenza umuntu acabange ngawe kude
Amazinyo Ephilile Nokunakekelwa Okufanele
Chicory, izakhiwo eziwusizo isiphuzo
Ukuxazulula izinkinga zokungqubuzana emsebenzini
Umculi u-Justin Bieber
Amabhontshisi ase Cornish
Yini ongayinikeza ngosuku lokuzalwa lomamazala?
Ama-patties anobhekwe yengulube ku-grill